Windows 10 isinika umbono wokuba inokuba yintoni iprojekthi yeNeon | Abadali be-Intanethi
Iingcamango zibeka umzimba wonke we-interface ukuba inguqu yeplatifomu ethile kufuneka isinike yona kwaye yiyo kuxhomekeke kwiqonga ngalinye, Siza kuba nakho ukugcina iimpawu ezithile eziza kwenza ukuba nganye kwezi ibe yinto ekhethekileyo kwaye ikhethekileyo kwintengiso.
Ngale ndlela, iqonga ngalinye iya kuba neqela labasebenzisi abathembekileyo (kunye nabanye abangathembekanga kangako) ukuba, ngokuxhomekeke kwimisebenzi ebonelelwa ngala maqonga, iya kuqhubeka nokubeka iliso kula maqonga kunye neenguqulelo zawo ezintsha. Konke kuza kwindlela, kwindlela yokuyila ujongano, imiboniso yayo, oopopayi bayo, umzimba wayo kunye nokusebenza kwayo ngokubanzi.
Yazi iprojekthi yeNeón
Phakathi kweeprojekthi ezininzi, Windows Inike ukonyuka kweenguqulelo ezininzi, ngokweemfuno ezivele ngokuhamba kwexesha, yathi inkampani ithatha isigqibo sokuba loluphi utshintsho oluya kuthi lube nakho ngaphakathi kweempawu zalo ezintsha. Kule nto sinokongeza inkqubela phambili ngaphakathi kwimo yeSoftware esinokufumana uphuculo kwimicimbi enje intetho kunye nobukhali bemifanekiso, oopopayi, ulawulo lolwazi, njl., kuba nganye yezi mpawu ihlala iguquka, inika iingcinga ezintsha.
KwiWindows, oko kubizwa ngokuba Iprojekthi yeNeon imele enye yeekhonsepthi zoyilo kunye nolindelo oluphezulu kwinxalenye yabasebenzisi beli qonga. Kungenxa yokuba iWindows ikhokelele kukungaqiniseki okuninzi ngale nto yoyilo, ngokubandakanya abasebenzisi bayo kwingqumbo.
Kwinxalenye yabasebenzisi, uninzi luye lwenzeka amagqabantshintshi ngolu luvo lutsha, kuba kulindeleke ukuba ibonise inkalo egcwele izinto ezintsha kunye neendlela ezimnandi ngayo yonke indlela, umba kubantu abaninzi, lityala elinokubakho kuMicrosoft kuluntu lonke lwabasebenzisi.
Okwangoku, kuye kwakho iinzame ezininzi zabaqulunqi eziye zakhokelela ekuqwalaselweni kwento abacinga ukuba inokuba sisixhobo sokunxibelelana Windows 10 umxholo wokuyila.
Omnye wabo bayili baseJamani UNadir alsam, eyilele ukutolikwa kwayo koko ikubona kuyiloo nto ibizwa ngokuba yiProjekthi yeNeon.
Phakathi kwabagxeki, kwathiwa imodeli enjalo ijongeka intle kakhulu, ucinga ukwanda kokulindelwe ngumsebenzisi malunga neProjekthi yeNeon. Kwaye i-Alsam yenze iikhonsepthi zoyilo ezininzi apho utshintsho phakathi kwamazwe ahlukeneyo enkqubo yokusebenza lunokubongwa. Ukongeza, ibonisa indlela imenyu yokuqala kunye ne-interface ezilawula ngayo ukuziqhelanisa nezixhobo ezinjengeethebhulethi, isixhobo esiphathwayo okanye idesktop eqhelekileyo.
Izinto ezibonakalayo kwimenyu kunye nee icon ziye zatshintsha ezona zinto ziphambili kulo prototype, kubandakanya umphumo weglasi ubuyile nangona i-tweaks ezimbalwa. Ukongeza, ibha yokunxibelelana inokudlala kakhulu ngendlela yentlalontle, ethi ekugqibeleni ibaluleke ngakumbi kolu hlobo lwenkcazo.
Ezi ntlobo zeeprojekthi zikhokelele kulindelo oluninzi malunga nokuba ingaba yintoni inkqubo ye 10 Windows, Ukuvumela abasebenzisi ukuba benze ngakumbi nangakumbi ukuba olu hlobo loyilo lweengcinga lunokuba yintoni.
Phakathi kwezinto ezininzi ezilindelweyo, u-Aslam ukwazile ukunika ubomi kwinto eqikelelwa ukuba ingumbono omtsha wale nkqubo iphela kwaye kukuba ngokwenza le prototype, abasebenzisi bakwazile ukubheja ngakumbi ukuba iyakuba yintoni le uyilo lutsha, ngenxa yesi sizathu , ukulinda kunye nolindelo luyanda ixesha elidlulele. Kwaye kunjalo, nokuba zithini na izimvo, kubonakala ngathi iWindows kufuneka, ngembopheleleko, inike abasebenzisi bayo eyona ilungileyo kuyo yonke imisebenzi yabo ngaphakathi kwesakhelo seengcinga zoyilo lwabo, abathi, ekuhambeni kwexesha, bazenzela ixesha, a ulindelo lwento enokuba leli nqanaba litsha leqonga elidumileyo elenziwe phantsi kweengqondo eziqaqambileyo zeMicrosoft.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Uyilo oluqinisekileyo lwe Windows 10 isinika umbono wokuba inokuba yintoni iprojekthi yeNeon